चीन थ्रीडी फाइबरग्लास बुना कपडा निर्माता र आपूर्तिकर्ता बेहाइ फाइबरग्लास
--D स्पेसर कपडाले दुई द्वि-दिशात्मक बुने कपडा सतहहरू समावेश गर्दछ, जुन यांत्रिक रूपमा ठाडो बुनेर पाइल्ससँग जोडिएको छ।
र दुई एस आकारको ढेर एकसाथ एक स्तम्भ बनाउँदछ, ताना दिशामा--आकार र वेफ्ट दिशामा १-आकार।
--D स्पेसर कपडाले दुई द्वि-दिशात्मक बुने कपडा सतहहरू समावेश गर्दछ, जुन यांत्रिक रूपमा ठाडो बुनेर पाइल्ससँग जोडिएको छ। र दुई एस आकारको ढेर एकसाथ एक स्तम्भ बनाउँदछ, ताना दिशामा--आकार र वेफ्ट दिशामा १-आकार।
--D स्पेसर कपडा गिलास फाइबर, कार्बन फाइबर वा बेसाल्ट फाइबरबाट बन्न सकिन्छ। साथै तिनीहरूको हाइब्रिड कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
स्तम्भ उचाईको दायरा: --50० मिमी, चौडाईको दायरा: ≤≤००० मिमी।
एरियल घनत्व, उचाई र स्तम्भहरूको वितरण घनत्व सहित संरचना प्यारामिटरहरूको डिजाइन लचिलो छन्।
--D स्पेसर फेब्रिक कम्पोजिटले उच्च छाला-कोर डिबन्डिंग प्रतिरोध र प्रभाव प्रतिरोध र प्रभाव प्रतिरोध, हल्का वजन प्रदान गर्न सक्दछ। उच्च कठोरता, उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन, ध्वनिक भिज्ने इत्यादि।
थ्रीडी फाइबरग्लास बुना कपडा विशिष्टता
क्षेत्र वजन (g / m2)
तानाको घनत्व (अन्त्य / सेमी)
Weft को घनत्व (समाप्त / सेमी)
तन्यता शक्ति ताना (n / 50mm)
तन्यता शक्ति Weft (n / 50mm)
बेइहाई थ्रीडी फाइबरग्लास थ्रीडी बुनेको कपडाको FAQ
१) म कसरी बेइहाई D डी कपडामा थप तह र अन्य सामग्री थप्न सक्छु?
तपाइँ बेइहाई थ्रीडी कपडामा गीलामा भिजेको अन्य सामग्री (CSM, Roving, फोम आदि) लागू गर्न सक्नुहुनेछ।3मिमी गिलास भिजेको बेइहाइ थ्रीडीमा रोल-अप गर्न सकिन्छ समाप्त समयको अन्त्य हुनु अघि र पूर्ण वसन्त फिर्ता बलको ग्यारेन्टी हुनेछ। जेल मोटेर पछाडि राम्रो मोटाईका लेमिनेटेड गर्न सकिन्छ।
२) बेइहाई 3D थ्री कपडाहरूमा कसरी सजावटी ल्यामिनेटहरू (उदाहरण HPL प्रिन्टहरू) लागू गर्ने?
सजावटी ल्यामिनेटहरू मोल्ड-साइडमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र फेब्रिक टुक्रा टुक्राको माथि सिधा टुक्रा टुक्रा गरीन्छ वा सजावटी ल्यामिनेटहरू भिजेको बेइहाइ थ्रीडी कपडामा लुकाउन सकिन्छ।
)) बेइहाई थ्रीडीको साथ ए angle्गल वा कर्भ कसरी गर्ने?
बेहाई थ्रीडीको एक फाइदा यो हो कि यो पूर्ण रूपमा आकारको र ड्राईपेबल हो। केवल वांछित कोण वा मोल्डमा घुमाउनु र राम्रो रोल गर्नुहोस्।
)) म कसरी बेइहाई थ्रीडी ल्यामिनेट रंग गर्न सक्छु?
राल रंग गरेर (यसमा पिग्मेन्ट थप गर्दै)
)) म कसरी बेइहाई 3D डी ल्यामिनेटमा चिकना सतह तपाईंको नमूनाहरूमा चिल्लो सतह जस्ता प्राप्त गर्न सक्छु?
नमूनाहरूको चिल्लो सतहलाई चिल्लो मोमड मोल्ड चाहिन्छ, जस्तै गिलास वा मेलामाइन। दुबै छेउमा चिल्लो सतह प्राप्त गर्न, तपाईं भिजेको बेइहाइ 3D डीमा दोस्रो मोम्स्ड मोल्ड (क्लैम्प मोल्ड) लागू गर्न सक्नुहुनेछ, जुन कपडाको मोटाईलाई ध्यानमा राख्नुहोस्।
)) म कसरी पक्का हुन सक्छु कि बेइहाई 3D थ्री कपडा पूर्णतया गर्भ निषेध गरिएको छ?
तपाईं सजिलै पारदर्शिता को स्तर द्वारा भन्न सक्नुहुन्छ यदि बेहाई थ्रीडी राम्ररी भिजेको छ। बढि राललाई किनारा- र कपडाबाहिर मात्र रोलिंग गरेर ओभरसिच्युरेट गरिएका क्षेत्रहरू (समावेश) बेवास्ता गर्नुहोस्। यसले कपडामा बाँकी रहेको रालको सही मात्रा छोड्नेछ।
)) म कसरी बेइहाई थ्रीडीको जेलकोटमा प्रिन्ट-थ्रु गर्नबाट रोक्न सक्छु?
Most अधिकतर अनुप्रयोगहरूको लागि, सीएसएमको एक साधारण घुम्टो वा लेयर पर्याप्त हुन्छ।
Critical अधिक महत्वपूर्ण दृश्य अनुप्रयोगहरूको लागि, तपाईं प्रिन्ट-ब्लकि। बाधा कोट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
• अर्को तरीकाले बेइहाई थ्रीडी थप्नु अघि बाहिरी छालाको उपचार गर्न दिनु हो।
)) म कसरी बेइहाई थ्रीडी ल्यामिनेटको पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न सक्छु?
Translucency रालको रंगको परिणाम हो, तपाईंको राल आपूर्तिकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
)) बेहाई 3D थ्री कपडाको बढ्दो (वसन्त पछाडि) क्षमताको कारण के हो?
बेइहाई 3D थ्री ग्लास कपडियाहरू चतुरतासाथ गिलासको प्राकृतिक गुणहरूको वरिपरि डिजाइन गरिएको छ। ग्लास 'बेन्ट' हुन सक्छ तर 'क्रेज' हुन सक्दैन। कल्पना गर्नुहोस् कि ती सबै स्प्रि .हरू टुक्रा टुक्रा र ड्याक्लेयरहरु लाई अलग धारामा, रालले यस कार्यलाई उत्तेजित गर्दछ (जसलाई केशिका पनि भनिन्छ)।
१०) बेहाइ 3D थ्री कपडा राम्ररी उपचार गर्दैन, म के गर्ने?
दुई सम्भावित समाधानहरू
१) स्टाइलिन युक्त रेजिनसँग काम गर्दा, बेइहाई थ्रीडीको साथ अस्थिर स्टायरिनको एन्ट्रापमेन्टले उपचार रोक्न सक्छ। एक कम (एर) स्टायरिन उत्सर्जन (एलएसई) प्रकारको राल वा वैकल्पिक रूपमा स्टाइलिन उत्सर्जन रिड्यूसर (जस्तै: पॉलिकरको लागि बाइक एस-740० र बाइक एस-750०) रेजिनमा थप्न सिफारिस गरिन्छ।
२) रालको कम जनसंख्यालाई क्षतिपूर्ति दिन र यसको साथ ठाडो पातलो धागोहरूमा तापक्रम घटाउने तापमानलाई अत्यधिक प्रतिक्रियाशील उपचारको सिफारिस गरिन्छ। यो एक बृद्धि उत्प्रेरक स्तर र जेल स्तर सेट गर्न एक अवरोधकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर (प्राथमिकता उत्प्रेरक) को साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
११) म कसरी बेइहाई 3D डीको सतह क्वालिटीमा क्षतिहरूलाई रोक्न सक्छु (ड्रेक्लेयरहरूमा झुर्रीहरू र फोल्डहरू)?
भण्डारण गुणस्तरको ग्यारेन्टीको लागि महत्त्वपूर्ण छ: सामान्य तापक्रममा सुख्खा वातावरणमा रोलहरू तेर्सो रूपमा स्टक गर्नुहोस् फेब्रिकलाई समान रूपमा अनक्रल गर्नुहोस् र फेब्रिकमा फोल्ड नगर्नुहोस्।
Old फोल्डहरू: तपाईं सजिलैसँग रोलरलाई स्लाइड गरेर पट्टि हटाउन सक्नुहुन्छ यसको नजिक रोलिंग गर्दा रोलरलाई रोलि rol गर्नुहोस्
• रिr्कल्स: रि the्कलमा हल्का रूपमा रोलिंग गर्नाले यसलाई हराउने छ
अघिल्लो: रालको साथ 3D एफआरपी प्यानल
अर्को: बुने बुभिंग कम्बो चटाई
3d फाइबरग्लास बुने कपडा
3d बुने कपडा
3d बुने ग्लास फाइबर कपडा